Semiconductors kukhona impahla eziyisisekelo kuyiphi ukwakha chips yesimanje kakhulu ebucayi okushisa aphakeme ukuphi. Futhi uma ucabangela ezingeni lamanje ukushisa manje izilimi emaphakathi kanye ihluzo, ngezinye izikhathi okubizwa ngokuthi Watts 100 ukufakwa isofthiwe yohlelo ukuqapha lokushisa izingxenye sekhompyutha kubonakale ngempela engadingekile.
Esikhathini ingxenye yalezi Izinsiza manje wathola njengoba uhlelo ezikhethekile kakhulu, "bavalelwa" ngaphansi abakhiqizi ethile umkhiqizo, futhi uhlobo "abavuni", ivumela ukuqapha ukufundwa ezahlukene enkulu lokushisa izinzwa cishe zonke kumadivayisi abambisana leli khono.
A ahlukene isofthiwe module eyehlayo njengoba uhlelo ukuqapha lokushisa CPU, ihluzo ikhadi, umbadlana futhi idrayivu kanzima ngokuvamile ingxenye iningi amathuluzi ukuze ibuyekezwe futhi ukuxilongwa kukhompyutha yakho. Ithuluzi edume kakhulu ekilasini yayo - aida 64, HWInfo, ASTRA32. Yiqiniso, khumbule "Swiss ibutho ummese" - ngempela eqolo ngoba imithombo computer, ukuze imikhiqizo efana ayifanele kakhulu ukusetshenziswa unomphela.
Uhlelo nokuphathelene for ukuqapha CPU lokushisa isivele iyingxenye ebalulekile disc ukuthi umbadlana abakhiqizi kukhona uqimba yokuqala afakwe ebhokisini ne imikhiqizo. Njengomthetho, lezi imikhiqizo "ngensimbi" ukusebenza amakhadi "bomdabu". Futhi, ngokuhlangenwe nakho kwayo, ngingasho ukuthi kube lula esibonakalayo, la mathuluzi musa kukhanye. Inzuzo kuphela imikhiqizo enjalo cishe 100% isiqinisekiso emagama efanele lokushisa izinzwa ukufundwa.
Uhlelo olulandelayo ukuqapha lokushisa zazo kuyafaneleka ukucabangela, ngokuthi CoreTemp. Lona kwakuwumsebenzi Iphrojekthi endala elikhona emakethe kusukela 2006. Izinzuzo main kwalo mkhiqizo - kuba mahhala, eguquguqukayo kanye ukusebenza ocebile. Isekela zonke izilimi zamanje manje, ithuluzi njalo olusha futhi osekelwa CPU entsha.
iwebhusayithi Umenzi, kukhona ezifana amabhonasi nice, like a Igajethi for Microsoft Windows Vista / Windows 7, add-on for zokuqapha eqhelile lokushisa, kuhlanganise kanye namadivayisi eselula, njll Lolu hlelo lusebenza kahle nge multicore izilimi futhi uyakwazi ukubonisa kanjani izinga lokushisa umongo ngamunye ngokwehlukana futhi kuba khona isilinganiso sabangu idatha. Ngesikhathi esifanayo Umbuso indawo is hhayi Resource khudlwana, ngakho abanikazi kungukuthi ukulingana ngisho entsha ye-computer.
Yiqiniso, lena akuyona uhlelo kuphela ukuqapha lokushisa. Phakathi amathuluzi eyaziwa alesi sigaba kufanele kuphawulwe HWMonitor, SpeedFan, Real Temp, Hmonitor. Ezinye zazo kuphela ukusekela izilimi abakhiqizi ethile (isib Temp Real isebenza kuphela nge Intel-based), ezinye izinsiza - ukhokhe.
Uma umsebenzisi kudingeka ukulandelela lokushisa GPU, uhlelo kunazo owaziwa ukuqapha lokushisa ikhadi ividiyo - kuba okuncane sangomhla ngezindinganiso zanamuhla, kodwa namanje langempela Umbuso RivaTuner. Ngesikhathi lolu hlelo lenziwe esihle Tuning Overclocking ihluzo amakhadi esekelwe NVIDIA chips (kuleli cala, nabanye ukubhuka, uhlelo wasebenza kahle, futhi ne ATI isiqophi processor). Kwaphela iminyaka eminingi, le phrojekthi akwenzeki. Kodwa esekelwe ikhodi yayo manje, kukhona nezinye izinhlelo eziningana, futhi elalidume kunawo wonke zazo - EVGA Precision futhi MSI Afterburner. Uma Umbuso wokuqala eyenzelwe ukusebenza ihluzo amakhadi kusukela EVGA, wesibili agcinwayo umoya jikelele kanye nenkululeko esivela ngisho RivaTuner. Nokho, liphinde freeware.
Bobabili nomkhiqizi enkulu ihluzo izilimi njengengxenye abashayeli babo futhi ahlinzeke ngezidingo ezikhethekile "ukuqapha" isimo ikhadi ividiyo, kuhlanganise futhi i-GPU lokushisa. Kodwa ngesikhathi esifanayo, Isimanga siwukuthi, Umbuso indawo efanayo MSI Afterburner «umkhumbi" uhlelo hhayi okungaka, plus has a ukusebenza ocebile.
Indlela ukulanda ividiyo kusuka ku-YouTube: izindlela 5 main
Ukwahlukanisa emachibini imvelaphi yabo
Ukwenza indawo phambi kwendlu: design, imibono ezithakazelisayo kanye nezincomo